काठमाण्डौ । इटलीमा विश्वका दुई दिग्गज टेक कम्पनीहरु गुगल र एप्पललाई भारी जरिवाना गरिएको छ। इटलीमा प्रयोगकर्तासँग जोडिएका जानकारीहरुको आक्रामक ढंगले व्यावासयिक प्रयोग गरिएकोमा दोषी ठहर गिर्दै गुगल र एप्पललाई भारी जरिवाना गरिएको हो। यी दुवै कम्पनीलाई इटलीको एन्टीट्रस्ट नियामकले १–१ करोड युरोको जरिवाना लगाएको छ। यो जरिवाना...
हाई–प्रोफाइल व्यक्तिहरुलाई जासुसीबाट बचाउँदै गुगल, ल्याउँदैछ यस्तो दमदार सेक्युरिटी फिचर
काठमाण्डौ । गुगलले हाई–प्रोफाइल व्यक्तिहरुलाई साइबर हमलाबाट बचाउनका लागि साइबर सेक्युरिटी प्रोटेक्सन फिचर लन्च गर्ने घोषणा गरेको छ। एकैदिनमा १४ हजार जी–मेल प्रयोगकर्तामाथि साइबर हमला भएको खबर बाहिरिएको एक दिनपछि गुगलले यस्तो घोषणा गरेको हो। यो साइबर हमला रुस सरकारको समूह एपीटी२८ले गरेको आरोप लगाइएको छ। जेडीनेटका खबरका...
गुगलका कर्मचारीलाई २०२१ सेप्टेम्बरसम्म ‘वर्क फ्रम होम’ सुविधा
काठमाण्डौ । गुगलले कर्मचारीहरुका लागि ‘वर्क फ्रम होम’ सुविधा सन् २०२१ सेप्टेम्बरसम्म दिने भएको छ। न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित समाचारअनुसार अल्फाबेट तथा गुगलका सीईओ सुन्दर पिचईले वर्क फ्रम होमको सुविधा बढाइएको जानकारी गराएका हुन्। सन् २०२१ अक्टोबरबाट गुगलका कार्यालयहरु खुले पनि कर्मचारीहरुले तीन कार्यालयबाट र बाँकी दिन...
फ्रान्समा गुगल र अमेजनलाई रु. १८ अर्ब जरिवाना
काठमाण्डौ । फ्रान्समा डेटा गोपनीयतामाथि निगरानी राख्ने निकाय नेसनल कमिसन अन इन्फोमेटिक्स एन्ड लिबर्टी) सीएनआईएलले गुगल र अमेजनमाथि जरिवाना लगाएको छ। सीएनआईएलले गुगललाई १० करोड युरो (रु. १४ अर्ब २३ करोड) र अमेजनलाई ३.५ करोड युरो (रु. ४ अर्ब ९८ करोड) को जरिवाना लगाएको हो। यी दुवैलाई फ्रान्सको विज्ञापन कुकिज नियमहरुको उल्लंघन गरेको आरोप...
गुगलले ल्यायो फ्याक्ट चेकिङ टुल, अब फर्जी तस्बिर र भिडियोमा लाग्नेछ रोक
काठमाण्डौ । फर्जी तस्बिर र भिडियोमा रोक लगाउनका लागि सर्च इन्जिन गुगलले विशेष पहल सुरु गरेको छ। फर्जी तस्बिर र भिडियोको पहिचानका लागि गुगलले टुल सुरु गरेको हो। त्यहाँ यस्ता तस्बिर र भिडियो पहिचानका लागि एउटा नयाँ फ्याक्ट चेक मार्कर पनि जडान गरिएको छ। जुन गुगलको सर्च रिजल्टमा तस्बिरका साथ देखिनेछ। यो टुल फर्जी तस्बिरको पहिचान गरेर...
काठमाण्डौ । गुगलले पाँच महिनाअघि सुरुआत गरेको युनिक आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) मा आधारित फोटो प्रिन्टिङ सेवा पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने योजना बनाएको छ। एआई फोटो प्रिन्टिङ सेवा एउटा मन्थ्ली पेड सर्भिस हो। जहाँ यसका प्रयोगकर्ताले आफ्नो कलेक्सनमा रहेका फोटोहरु प्रिन्ट गर्न सक्छन्। गुगलले यो सेवा बन्द गर्ने योजना सुनाउँदै आफ्ना...
काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरसको प्रभावले विज्ञापनमा आएको कमी भन्दै टेक कम्पनी गुुगलले करिब २ हजार करार र अस्थायी कर्मचारीलाई काम हटाएको छ। न्युुयोर्क टाइम्सका अनुुसार कम्पनीले कर्मचारी घटाएर खर्च कटौती गर्ने निर्णयअनुसार ती कर्मचारीलाई कामबाट हटाएको हो। गुुगलका प्रमुुख वित्तीय अफिसर रुथ पोराटले यो वर्ष गत वर्षको तुुलनामा कम्पनीले...
काठमाण्डौ। एप्पल र गुुगलले संयुुक्त रुपमा आफ्नो एक्सपोजर कोरोना ट्रेसिङ नोटिफिकेसन ‘एपीआई’ एपको पहिलो पब्लिक भर्सन सार्वजनिक गरेका छन्। पहिलोपटक एप्पल र गुुगलको साझेदारीमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सफ्टवेयर टुल ल्याइएको हो। यसले संक्रमितको पहिचान तथा लोकेसनका डेटाहरुलाई सुुुरक्षित राखेर गोपनीयताको संरक्षण गर्ने बताइएको �...